August 2016 - Page 2 of 41 - Sawirrotv
Dhalinyarada ka Baxda Jaamacadaha (VIDEO)
Hadaba Ardaydan ayaa qaar niyad jab xoogan ka qaada markii ay arkaan iyaga oo haysta Shahaado hadana, aan heli karin shaqo u qalanta, dhalinyaradan ayaa qaar waxa ay doorbidaan inay dalka isaga tagaan oo ay Tahriib u soo aadan wadamada reer galbeedka, waxana ay dhalinyaradani wajahaan dhibaatooyin kala duwan inta ay tahriibka ku soo jiraan. …
Sawirro Horleh oo Laga Helayo Weerarkii Shalay Lagu Qaaday Hoteelka SYL (SAWIRRO)
August 31, 2016 – Weerarkii Qaraxa ee Gaariga Xamuulka ah loo adeegsaday ee shalay lagu weeraray Hoteelka SYL ee magaalada Muqdisho ayaa waxaa ka soo baxaya sawirro muujinayo baaxadda ay gaarsiisantahay Bur-burka soo gaaray hoteelka SYL iyo guryaha ku yaala nawaaxiga hoteelkaasi. Quwadda qaraxa oo ahayd mid aad u wayn ayaa waxa ay Bohol ka dhex …
SAWIRRO – Qaraxii Hotel SYL Lagu Weeraray
Quwadda qaraxa oo ahayd mid aad u wayn ayaa waxa ay Bohol ka dhex qoday wadada laamiga ahay ee uu gaarigaasi xamuulka ah taagnaa, quwadda qaraxa gaarigan ayaa waxaa la sheegayaa inay laba jibaar ahayd tii ay xagjiriinta al Shabaab ku qaadeen Hotel Jazeera ee magaalada Muqdisho.
August 30, 2016 – Waxaa sii kordhaya saacad walba geerida dadkii wax ku noqday weerarkii ismiidaaminta ahaa ee barqanimadii maanta lagu qaaday Hotel SYL ee Magaalada Muqdisho, waxaana la sheegayaa in geerida dadkii wax ku noqdayay weerarkaasi ay gaarayaan ilaa 25 qof iyadoo dhaawacana uu yahay ila 40 qof. Inta badan dhaawacyadii maanta ayaa waxaa la …
Geerida Qaraxii Maanta ee Hotel SYL (VIDEO)
Inta badan dhaawacyadii maanta ayaa waxaa la kala gaarsiiyay Isbitaalada Daaru Shifa iyo isbitaalka Madiina, iyadoona dhakhaatiirtu la tacaaleyso xaaladooda caafimaadeed. Dadka dhaawacmay waxaa qaarkood ku jira kuwo ay xaaladoodu garaabo tahay. Ninkii la socday gaariga weerarka lagu fuliyay, ayaa xoog kaga soo gudbay Check Point ay ku sugnaayeen Ciidamada Dowladda, iyadoo inta aanu ku …
Puntland oo soo Bandhigtay Magacyada Ragii ka Danbeeyay Qaraxyada Magaalada Gaalkacyo (SAWIRRO)
August 30, 2016 – shaqsiyaad lagu sheegay in ay ka dambeeyeen qaraxyadii ka dhacay waqooyiga magaalaada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug. Sidoo kale war-saxaafadeedka ayaa lagu war geliyey dhamman hay’adaha amniga Puntland in ay soo qab-qabtaan shaqsiyaadkaasi, isla markaan hor keenaan sharciga iyo caddaaladda. Warsaxaafadeedka ayaa u qornaa sida tan: Waxaa lagu wargelinayaa dhammaan hay’adaha …
Wasiir Maareeye oo ka Hadlay Qaraxii Hoteel SYL iyo Madaxdii kale ee Goobtaasi ku Dhaawacantay (VIDEO)
August 30, 2016 – Qaraxii Hoteel SYL ka dhacay maanta ayaa waxaa loo soo adeegsaday gaari xamuul ah oo waxyaabaha qarxa laga soo buuxiyey ayaa burbur xoogan u geystay hoteelka SYL iyo guryaha ay shacabka leeyihiin ee ku dhawaa hoteelka. Hotelka SYL oo khasaaraha ugu ba’ni uu soo gaaray ayaa waxaa ku jiray xiligii uu qaraxu dhacayey …
Wasiir Maareeye iyo Qaraxii Hotelka SYL (VIDEO)
Hotelka SYL oo khasaaraha ugu ba’ni uu soo gaaray ayaa waxaa ku jiray xiligii uu qaraxu dhacayey wasiiro, xildhibaano, weriyeyaal iyo dad kale oo halkaas uga qeyb galayey shirar iyo seminaaro ka socday gudaha hotelka, kuwaasoo dhaawacyo fudud ay soo gaareen. Masuuliyiinta dhaawacyada soo gaareen waxaa ka mid ah wasiirka gaadiidka badda iyo dekedaha Nuux …
Ururka Al Shabaab oo Sheegtay Weerarkii Lagu Qarxiyay Hoteel SYL (VIDEO)
August 30, 2016 – Ururka Al Shabaab ayaa sheegtay masuuliyadda weerarkii maanta lagu qaaday Hoteel SYL weyn ee madaxda sare lagu soo dhaweeyo ee SYL, waxayna ku sheegeen in ay weerarkani ay ku beegsadeen Saraakiil sare oo Dowladda ka tirsan. Hoteelkan ayaa Lagu waday in lagu qabto shirka ay Muqdisho dhawaan ku yeelan lahaayeen Madaxweyneyaasha …
Qaraxii Lagu Beegsaday Hotel SYL (VIDEO)
Hoteelkan ayaa Lagu waday in lagu qabto shirka ay Muqdisho dhawaan ku yeelan lahaayeen Madaxweyneyaasha dalalka IGAD ee dhawaan ku balansanaa inay isugu yimaadaan magaalada Muqdisho. VIDEO – 1 VIDEO – 2 Qaraxan xoogan oo ahaa mid si weyn u gil gilay magaalada Muqdisho ayaa bur bur xoogan gaarsiiyay dhismaha Hoteelada SYL iyo Siyaad iyo …